အမျိုးသမီးဝါဒီဆိုတာဘာလဲ? – Purple Feminist Group
Feminism ဟာယောက်ျားတွေနဲ့တန်းညှိချင်နေတာ၊ဗိုင်းကောင်းကျောက်ဖိမနေချင်တဲ့မိန်းကလေးတွေရဲ့ပျက်စီးဖို့လမ်းကြောင်း၊သဘာဝကိုဆန့်ကျင်ချင်နေတာစတဲ့မမှန်ကန်တဲ့အချက်တွေနဲ့Feminist အမျိုးသမီးတွေကိုယောက်ျားမုန်းတီးတဲ့စိတ်တိုနေတဲ့အရူးအနှမ်းအုပ်စုသဖွယ်ထင်မြင်လာစေအောင်ပြောဆိုကြပါတယ်။ဒီထက်ပိုဆိုးတာကတော့အမျိုးသမီးများအနေနဲ့ကိုယ့်နေရာသိသင့်ကြောင်းကျားမခွဲခြားခြင်းပြဿနာဟာဒီနိုင်ငံမှာမရှိကြောင်းပြောသူများဖြစ်တယ်။
ကျွန်မအနေနဲ့တော့အမျိုးသမီးဝါဒီကိုအဓိပ္ပာယ်ဖွင့်ဆိုပုံကရှင်းရှင်းလေးပါပဲ။”တူညီတဲ့အားထုတ်မှုအတွက်တူညီတဲ့ရလာဒ်နဲ့အခွင့်အရေးကိုတောင်းဆိုခြင်း” (equal opportunities for equal efforts).
ကျားမတန်းတူညီမျှရေးဆိုတာယောက်ျားနဲ့မိန်းမဘယ်သူပိုသာလဲပိုကောင်းလဲဆိုတာကိုဆုံးဖြတ်ခြင်းမဟုတ်ပါဘူး။ယောက်ျားနဲ့မိန်းမအလုပ်တစ်ခုကိုလုပ်တဲ့အခါထည့်သုံးရတဲ့အားထုတ်မှု(ဉာဏ်ရည်ခွန်အား) တူနေရင်သူတို့ရသင့်ရထိုက်တဲ့လခအကျိုးအမြတ်ဟာလည်းပဲတူညီသင့်ပါတယ်။အမျိုးသမီးများအနေနဲ့စီးပွားရေးလုပ်ငန်းခွင်လူမှုရေးပြဿနာတိုင်းမှာဖိနှိပ်ခံထားရတာတွေရှိနေပါတယ်။သို့ပေမယ့်patriarchy ရဲ့အရှိန်အဝါကြောင့်ကျားမခွဲခြားခြင်းပြဿနာမရှိလို့အထင်ခံရအောင်မှိုင်းတိုက်ထားခြင်းကလဲနောက်ထပ်ပြောင်းလဲရမယ့်အယူဟောင်းတွေပါပဲ။
လုပ်ငန်းခွင်တွေမှာအလုပ်ချင်းတူတူပေမယ့်အမျိုးသမီးဖြစ်လို့လစာပိုနည်းတာ၊ရာထူးတိုးဖို့ခက်ခဲတာ၊လုပ်ငန်းတွင်းsexual harassment တွေတွေ့ကြုံနေရတာ၊နိုင်ငံရေးမှာအမျိုးသမီးခေါင်းဆောင်တွေနည်းပါးတာတွေဟာဒီနိုင်ငံမှာကျားမခွဲခြားခံရခြင်းတွေရှိနေတယ်ဆိုတာသက်သေပါပဲ။အဆိုးဆုံးကတော့”ယောက်ျားအလုပ်” လို့ခံယူထားတဲ့အလုပ်တွေမှာအမျိုးသမီးတွေကိုမလုပ်သင့်ကြောင်းမသင့်တော်ကြောင်းပြောဆိုခြင်းဖြစ်တယ်။သန်မာတဲ့ယောက်ျားကြီးတွေအလုပ်လို့သက်မှတ်ထားတဲ့အင်ဂျင်နီယာအလုပ်၊လေယာဉ်မောင်းနဲ့အောက်ခြေအလုပ်တွေပါပါဝင်ပါတယ်။
ဒီနေရာမှာစာရေးသူပြောချင်တာကတော့gender equality ဆိုတာစားစရာပိုင်မုန့်တစ်ခုမဟုတ်တဲ့အတွက်အမျိုးသမီးများတန်းတူညီအခွင့်အရေးပေးလိုက်တာဟာအမျိုးသားတွေရဲ့အခွင့်အရေဒလျှော့မသွားသလိူမဆုံးလဲမဆုံးရှုံးပါဘူး။Feminism ရဲ့ရည်ရွယ်ချက်ကထိုက်တန်တဲ့အခွင့်အရေးကိုသူများတွေနဲ့တန်းတူရရှိဖို့ကြိုးပမ်းတဲ့ဝါဒီတစ်ခုသာဖြစ်ပါတယ်။Patriarchy ဟာရာစုပေါင်းများစွာကြီးစိုးခဲ့ပြီးဖြစ်လို့ပြုပြင်ရခက်ပေမယ့်ကျွန်မတို့အားလုံးတို့အနေနဲ့feminism ကိုမြန်မာနိုင်ငံသို့ကြိုဆိုသင့်ဖို့အချိန်ရောက်လာပြီဖြစ်ပါတယ်။
ဆောင်းပါးရှင် – Victoria T.